sida loo daawado kubbadda koleejka oo aan lahayn fiilo bilaash ah | 7 Siyaabaha Sharciga ah
Bogga ugu weyn Sida Loo Daawado Kubbadda Kuleejka Iyadoon Lakab Lahayn | 7 Siyaabaha Sharciga ah
Qof qaraabo ah oo aan jeclahay inaan waqti la qaato, wuxuu ii ballanqaaday inuu i siin doono booqasho inta lagu jiro dhammaadka toddobaadka. Isagoo jecel kubbadda cagta, wuxuu weydiiyay haddii ay jirto hab uu ku daawan karo kubbadda koleejka tooska ah usbuucaas.
Si degdeg ah ayaan u idhi 'haa' waxaan hilmaamay inaan baajiyay ka -qayb -galkaygii fiilada sababta oo ah qiimaheeda qaaliga ah. Iyo xitaa anigoo adeegsanaya barnaamijka ESPN taleefankayga, ma sii deyn karay ilaa aan isdiiwaangaliyo.
Sababtoo ah waxaan jeclahay inaan isaga ag joogo, helitaanka hab kale si uu u daawado kubbadda koleejka oo aan lahayn fiilo ama dayax -gacmeed ayaa daruuri noqotay wakhtigaas.
Waxaan u tagay si aan u raadsado ikhtiyaarrada suurtogalka ah waxaanan ogaaday inay jiraan tan. Qeybta ugu fiican ayaa ah in qaar ka mid ah xulashooyinkaan ay bilaash yihiin. Aniga oo xamaasadeyda ku jira, waxaan ogaaday 7 siyaabood oo xalaal ah oo ku saabsan sida loo daawado kubbadda koleejka oo aan lahayn fiilo bilaash ah.
Hadda, anigoo og inay jiraan dad aniga oo kale ah oo raba inay ogaadaan sida loo sameeyo, waxaan soo diyaariyey liis hababkaan xalaasha ah ee aan ku helay cilmi -baaristeyda.
Jadwalka dulucda hoose ayaa ku siin doona dulmar qodobbada.
Sida Loo Daawado Kubbadda Kuleejka Iyadoon Cable Bilaash Lahayn
#1. Anteenada HDTV
Sidoo kale Akhri: 13 Beddelka TV -ga Cable oo leh Adeegyo Wanaagsan oo Qiimo Yar leh
#3. TV Sling
Eeg Sidoo kale: Philo vs Sling TV: Adeeggeeda Socodkee baa ka jaban & ka fiican?
Miyay tahay inaan isticmaalo internetka si aan u daawado kubbadda koleejka oo aan lahayn fiilo?
Intee in le'eg ayay Ikhtiyaarrada u yihiin TV -ga Cable?
Sidii aan hore u soo sheegay, qaar ka mid ah xulashooyinka waa bilaash. Markaa uma baahnid inaad wax iska qorto. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xiriir internet oo xoog leh iyo qalab.
HDTV Antenna waa ikhtiyaar weyn oo lagu daawado kubbadda koleejka. Marka laga reebo kanaalada kubbadda cagta, waxay sidoo kale bixisaa inta badan kanaalada TV -ga fiilada.
Sidoo kale, anteenada HDTV waxay ku siinaysaa sawir tayo wanaagsan oo ka fiican in kanaalka lagu sii daayo intarneedka.
Xaqiiqda xiisaha leh ee ku saabsan ikhtiyaarkan ayaa ah inay siiso hab wax ku ool ah si aad u hesho dhammaan kanaaladaada maxalliga ah iyada oo aan lahayn fiilo waxaadna daawan kartaa kanaal kasta oo hawada ka baxsan oo bilaash ah.
Akhri Sidoo kale: 13 Beddelka TV-ga Cable oo leh Adeegyo Fiican oo Qiimo Yar
Qaar ka mid ah kanaalada laga heli karo HDTV Antenna waxaa ka mid ah:
XIDHIIDHKA: Faallooyinka Eedeysanaha: Sharci ama Fadeexad | Samee $ 150/saac si aad u sheegto Maskaxdaada
ESPN+ waxay ka mid tahay siyaabaha xalaasha ah ee aad ku daawan karto kubbadda koleejka iyada oo aan lahayn fiilo, in kasta oo ay weli cusub tahay. Beddelkaan xadhiggu wuxuu bixiyaa xaddidnaan qaar ka mid ah cayaaraha kubbadda koleejka ee tooska ah oo lagu qoro $ 5 bishii.
Hoos u dhaca tegitaanka ikhtiyaarkan ayaa ah inaad weli heli doonto ikhtiyaar kale oo aad ku kaabto. Tani waa sababta oo ah maahan hab dhammaystiran oo lagu daawado ciyaaraha kulleejada tooska ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaad daawan kartaa kanaalada NBA iyo NFL.
Qaar ka mid ah adeegyada ku jira ESPN+ waa Adeegga waxaa ka mid ah:
Golf -ka PGA
Tartanka Tenniska ee ugu sarreeya iyo ciyaaraha Grand Slam.
Horyaalka Naadiga United
Horyaalka Kubadda Cagta Kanada
Horyaalka Kubadda Cagta Ingiriiska
Ciyaaraha UEFA Nations League.
Kuwa jecel kubbadda cagta ee doorbida daawashada ESPN oo keliya, u aadidda qorshaha fiilada waa lacag lumin. Sling TV wuu kuu adeegi karaa!
Doorashadani waxay leedahay saddex qorshe: Sling Orange, Sling Blue, iyo Blue and Orange Combo.
On Sling Orange, waxaad ka daawan kartaa kubbadda koleejka ESPN, ESPN2, iyo ESPN3 oo ah qiimaha rukunka ee $ 25 bishii. Waxay kaloo leedahay xirmooyin dheeri ah sida ESPNU, Shabakadda Pac-12, Shabakadda SEC, iyo Shabakadda Stadium.
Kaliya taasi waa inaad bixisaa kharash dheeraad ah $ 5 bishiiba. Hoos u dhaca ikhtiyaarkan ayaa ah inaad ku shubi karto oo keliya hal qalab markiiba.
On Sling Blue, ma daawan kartid ESPEN, laakiin waxaad daawan kartaa FS1, FS2, iyo kanaalada NBC iyo Fox ee gudaha.
In kasta oo aadan sii dayn karin ESPN oo dhinaceeda hoose ah, isu-diiwaangelinta xirmo dheeri ah oo qiimaheedu yahay $10 ayaa kaa caawin kara socodsiinta NFL RedZone. Waxayna tani ka dhigeysaa ikhtiyaarka xirmo wanaagsan oo loogu talagalay daawashada kubbadda cagta NFL.
Kadib Sling Orange + Sling Blue, waxaad ka heli kartaa xirmada isku -darka oo aad ku keydsan kartaa $ 10 bishii qiimaha labada qorshe ee kala duwan.
Muuqaalka ugu xiisaha badan ee Sling TV ayaa ah inay tahay habka ugu jaban ee lagu baahin karo kanaalada ESPN, FS1 iyo FS2.
Qaar ka mid ah kanaalada bilaashka ah ee Sling waxaa ka mid ah:
XIDHIIDHKA: Sidee ayuu Duckduckgo lacag u sameeyaa?|2022
Arag sidoo kale: Philo vs Sling TV: Adeeggeeda Socodkee baa ka jaban & ka fiican?
Qaab kale oo sharci ah oo ku saabsan sida loo daawado kubbadda koleejka oo aan lahayn fiilo waa iyada oo loo marayo Hulu Live TV. Socodka ESPN iyo Fox Sports, ikhtiyaarkan ayaa ka mid ah aaladaha ugu fiican.
On Hulu Live, waxaad hubsan kartaa inaad hesho inta badan kanaalada maxalliga ah ee muujinaya kubbadda koleejka. Ka sokow barnaamijyada kubbadda cagta, waxaad sidoo kale marin u yeelan kartaa maktabadda Hulu ee aad u baahan tahay filimada iyo taxanaha TV -ga.
Waxa wanaagsan ee ku saabsan Hulu Live TV ayaa ah inaad ku qori karto kubbadda koleejka kanaal kasta 50 -ka saacadood ee daruuriga ah ee DVR ee aad heli doonto.
Sidoo kale, waxaad awoodi doontaa inaad ku shubto shabakadaha isboortiga heer gobol oo lacag la'aan ah oo aad haysato qulqulka aaladda aan xadidnayn oo ah kharash dheeraad ah oo ah $ 15 bishii.
Xusuusnow, u -qoritaanka ikhtiyaarkan waa $ 45 bishii.
Hoos waxaa ah kanaallo laga heli karo Hulu Live TV:
Shabakada Tobanka Weyn.
Shabakadda ACC Dheeraad ah.
Vidgo waa adeeg toos u socda oo aan lahayn qandaraasyo muddo dheer ah oo la socda, uma baahnid fiilo ama dayax-gacmeed si aad u daawato kubbadda koleejka.
Ikhtiyaarkan wuxuu bixiyaa in ka badan 60 kanaal oo ay ku jiraan ESPN iyo FOX hal xirmo oo qiyaastii ah $ 40 bishii. Ma aha, waxaas oo dhan, waxaad sidoo kale heli doontaa tijaabo 7-maalmood oo lacag la’aan ah markaad is-qorto.
Marka laga reebo kanaalada, waxay bixisaa sida xulashooyinka kale, hal sifo oo weyn oo ka soocday inta kale waa in app-ka, aad ka qayb qaadan karto daawashada bulshada. Waxaad la daawan kartaa asxaabta ama dadka kale ee daawanaya kooxaha aad jeceshahay.
Waxaadna qulquli kartaa adoo adeegsanaya saddex aaladood isku mar adiga oo aan wax badan bixin.
Waa kuwan qaar ka mid ah kanaalada aad ka daawan karto Vidgo:
U aadida FuboTv waa doorasho kale oo weyn oo lagu daawado kubbadda koleejka iyada oo aan fiilo bilaash ah la helin. Waxaad haysataa in ka badan 100 kanaal oo aad ku daawato wax kasta oo aad rabto oo ay ku jiraan kubbadda cagta kulliyadda, NFL, iyo ciyaaraha kale.
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista ClickBank 2022: Ma Xalaalbaa In Lacag La Sameeyo ama Khiyaano Weyn
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee ku saabsan FuboTV ayaa ah inaad hesho tijaabo 7 maalmood oo lacag la’aan ah markaad is-qorto.
Qaar ka mid ah kanaalada ugu caansan ee la heli karo si aad toos ugu hesho kubbadda kubbadda koleejka waxaa ka mid ah:
Big Toban Network
On Stream2Watch.me, waxaad ka daawan kartaa si toos ah oo aad u dalbato North American Football (NFL), Canadian Football (CFB), iyo NCAA College Football league. Intaas waxaa sii dheer, waxaad marin buuxda u leedahay inaad ku daawato Ciyaaraha Ciyaarta iyo Super Bowl -ka intarneedka.
Waxa xiisaha lihi leh, doorashadani waxa ay bixisa muuqaalada tayada ugu sarreeya ee isticmaaleyaasheeda iyo jadwalka maalinlaha ah ee la cusboonaysiiyay ee dhacdooyinka ciyaaraha soo socda oo dhan lacag la’aan.
Iyada oo aan loo eegayn qalabka aad isticmaalayso, waxaad ka soo qulquli kartaa app Stream2watch sababtoo ah waxay la jaan qaadayaan ku dhawaad ​​dhammaan aaladaha.
Waxaa laga yaabaa inaad weli rabto inaad ogaato… ..
Hagaag badi xulashooyinka kor ku taxan, waxaad u baahan tahay isku xirnaan internet oo la isku halayn karo si aad u socodsiiso kubbadda cagta kulliyadda, marka laga reebo HDTV Antenna.
Iskudayga inaad ku qulquleyso aalado badan adoo adeegsanaya xulashooyinka sida Vidgo ama Hulu Live Tv, waxaa laga yaabaa inaad u baahato internet ka dhakhso badan oo la isku halleyn karo.
Talo wanaagsan, marka hore isku day inaad tijaabiso bilaashka ah ka hor intaadan iska diiwaan gelin mid ka mid ah xulashooyinka si aad u hubiso in doorashada aad rabto inaad buuxiso baahidaada.
Aad u dhaqaale badan!
Si ka duwan TV-ga Cable oo leh xirmo Aasaasi ah oo qiyaastii ah $ 30 bishii, waxaad ku bixin kartaa ugu yaraan $ 25 bishii qaar ka mid ah xulashooyinka kor ku xusan sida Sling. Isla $ 25, waxaad ku daawan kartaa inta badan kanaalada fiilooyinka iyo in ka badan.
Mid kasta oo ka mid ah siyaabaha xalaasha ah, waxaad ku daawan kartaa kubbadda koleejka, kanaalada fiilooyinka qaarkood, iyo qaar kaloo badan adigoon lacag badan bixin.
5 Istaraatijiyadood oo Fudud si aad u Hesho TV Cable Bilaash ah 2022
Faallooyinka Caymiska Safeco 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Bixiyeyaasha Caymisyo badan ayaa soo baxay, iyagoo siiya heerar kala duwan oo qiime macaamiishooda iyo macaamiishooda.…
Rosewholesale.com waa mid ka mid ah xarumaha ugu sareeya ee moodada bixiya oo bixiya qiimo jaban iyo adeegyo macaamiil oo heer sare ah. Gudaha…
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waxay si tartiib tartiib ah u noqotay qalab awood leh oo loogu talagalay sarrifka qiimaha. Suuqana wuu sii fidayaa marba marka ka sii badan…
Auto Trader Group waa mid ka mid ah suuqyada baabuurta dhijitaalka ah ee hormuudka ka ah Boqortooyada Midowday. Suuqa ayaa ogol…